MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA ISBAANISHKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Eeyaha Isbaanishka
Labrador Retriever / Cocker Spaniel ey isku dhafan oo isku dhafan
Hank Spanish ka 3 sano jir ah— 'Hank waa Eyga ugu fiican ee aan abid leeyahay.'
Spanador ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Isbaanish Mareykan ah . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Angel the Cocker Spaniel / black Lab Retriever mix breed ey (Spanishador)
'Tani waa Huck oo 7 bilood jir ah oo nasanaya ka dib maalin adag oo ciyaar ah. Wuxuu jecel yahay urta iyo diirimaadka dharka isla markiiba qalajiyaha. Isagu waa sheybaarka / Cocker Spaniel isku jira. '
Amy (aka Babba) Isbaanishka da'da 2 jirka ah— 'Amy waa eey aad u jecel, caqli badan, waxoogaa ka weyn a shaqeeya cocker . Waxay ku fiican tahay khiyaanooyinka, waxay jeceshahay soo celinta, waxay jeceshahay dhuumashada iyo raadinta iyo raadinta ugaarsiga waxayna guud ahaan jeceshahay in la kiciyo.
Amy (aka Babba) Isbaanishka da'da 2 jirka ah— Waxay leedahay wax badan oo is xakameyn ah mana dhaafi doonto xuduudaha guriga loo dejiyay, si kastaba ha noqotee waxay si xun ugu xusuusataa berrinka. Waxaan ka shaqeyneynaa tan!
Amy (aka Babba) Isbaanishka da'da 2 jirka ah— 'Waxaad culays saari kartaa cagteeda oo ma taaban doono ilaa amarka laga siiyo, wax ay gabadhayda 11 jirka ah bartay. Way fududahay in lagu tababaro arrintan. Iyadu si gaar ah iyadu maaha cunto loo hoggaansamo inkasta oo ay tahay wax run ahaantii dhadhan u leh sida kalluunka salmon. Iyadu waa qof shaqsiyad badan oo jacayl leh dadkuna waxay si joogto ah noogu sheegayaan waxa ey qurux badan tahay. Waan jecel nahay iyada!
Daisy the Spainador (Labrador Retriever / Cocker Spaniel mix) markuu jiro 8 bilood
Rocky, waa 4 jir Cocker Spaniel / Labrador iskutallaabta (Spanador)
Malibu waa Eyga loo yaqaan 'Cocker Spaniel / Lab' ee loo yaqaan 'Spanador' oo halkaan lagu muujiyey isagoo jira 7 sano.
Max, oo ah Labrador / Cocker Spaniel isku darka-qashin-saarkaan heeganka ah wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro kubbadda teniska iyo dabaasha.
Charlie oo ah haweeneyda loo yaqaan 'Spanador' eey yar oo 3 bilood jir ah— Iyadu waa mid aad u macaan oo aad u firfircoon. Waxay jeceshahay inay ku ciyaarto bisadeena, iyo inay soo ceshato wax kasta oo ay qaadi karto.
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Spainador
sanka cas sanduuqa iskudhafka feerka
iskudhafka dahabka isku dhafka bulldog american
rumaanka lagu qaso eeyaha shih tzu